यता काठमाडौँमा अशोक दर्जीको नयाँ गीत रिलिज उता बाजुरामा ध्रुब बिकको यस्तो हालत • Gazzabko Online
Gazzabkoonline || May 10, 2018 at 10:02 am
पछिल्लो समय बालबालिकादेखि बूढापाकासम्मले मानिसको अनौठा प्रतिभा हेर्न लालयित बन्ने गरेकाले पनि सम्भावना बोकेका प्रतिभाले सामाजिक संजालको माध्यमबाट छोटो समयमा नै उपलब्धि हासिल गरिरहेका छन। यसको पछिल्लो उदाहरण हुन् झापाका अशोक दर्जी र बाजुराका ध्रुब बिक । हर कोहि मानिससँग केहि न केहि प्रतिभा हुन्छ । कोहि अवसर प्राप्त गरेर सफलताको दिशामा अगाडी बढ्छन भने कोही अवसर नपाएकै कारण ओझेलमा परेका हुन्छन। पर्याप्त अवसर पाउने हो भने ओझेलमा परेका प्रतिभाहरु राष्ट्रका गहना पनि बन्न सक्छन।
सर्वत्र चर्चाको शिखरमा रहेका अशोक दर्जीले युटुब च्यानलहरुकै कारण आफ्नो सुनौलो भबिष्य प्राप्त गरेका छन् । उनको सडक पेटीको गायन यात्राले अहिले उनलाई गित निकाल्ने सम्मको स्थितीमा पुर्याएको छ । सडकपेटीमा गीत गाउँदै हिड्ने अशोक अहिले बिद्यालय जाने भैसकेका छन। यस्तै हालसालै मात्र सामाजिक संजाल फेसबुकमार्फत आफ्नो जादुमयी आवाजले सबैलाई मन्त्रमुग्ध पार्न सफल बाजुराका ध्रुब बिक पनि सफलताको शिखर चुम्न आतुर छन। फरक यत्ति हो कि ध्रुब बिक भगवानले दिएको अमुल्य आवाजलाई विश्वसामु पुर्याउन सामर्थ्य राख्ने सहयोगी मनहरुको अभावमा विकट गाउँको खोलानाला, चट्टान अनि सुस्केराहरुमा मात्र आवाज परिचित गराउन सिमित छन। कक्षा ७ मा एक सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत उनी आफ्नो प्रतिभा गाउँमा मात्रै सिमित राख्न बाध्य छन।
एकाएक सामाजिक संजाल युट्युबमा भाइरल भएका प्रतिभाको धनि बालक अशोक दर्जीको पहिलो गीत सार्वजनिक भैसकेको छ । रेकर्डीङ समयमा नै भाइरल भएको ‘मन बिनाको धन ठुलो की धन बिनाको मन ?…’ बोलको गीतले अहिले चर्चा परिचर्चा कमाइरहेको छ। ध्रुब बिकको सुमधुर आवाज भने अझै पनि छायाँमा परिरहेको छ । शालीन स्वभाव अनि जादुमयी आवाजका धनी बाजुराका ध्रुब बिक सामाजिक संजालमा भाइरल त भैरहेका छन। तर पर्याप्त मात्रामा मिडिया प्रचार हुन नसक्दा उनको अद्भुद प्रतिभा गाउँमा मात्र सिमित रहने हो कि भन्ने डर जोसुकैलाई हुन सक्छ। अशोक दर्जीजस्ता प्रतिभाले अवसर पाएर सफलताको शिखर चुम्न सक्छन भने ध्रुब बिकले किन नपाउने ? यसको लागि हरेक नेपालीको साथ र सहयोग भने पक्कै हुनुपर्छ। एक सार्वजनिक कार्यक्रममा ध्रुब बिकले गीत गाउँदा उनको जादुमयी आवाज सुनेर सबै छक्क परेका थिए। उनले गीत गाएको भिडियोलाई क्षणभरमा नै करोडौ मानिसले मन पराए।
अशोक दर्जीको घर राजधानीबाट नजिकै थियो त सबै मिडिया उनको घरसम्मै पुगेर भएपनि उनको प्रतिभालाई विश्वसामु चिनाउन सफल भए। ध्रुब बिकको घर राजधानीबाट धेरै टाढा छ को पुग्ने बाजुरासम्म ? कसले काठमाडौँसम्म ल्याउने उनको प्रतिभालाई ? ध्रुब बिकको मन्त्रमुग्ध पार्ने स्वर सुनेर जोकोही पनि अचम्ममा पर्नुहुन्छ। उनको स्वर हस्ती मानिएका कुनै बाल कलाकारको भन्दा कम्तिको छैन । ओझेलमा परेका हरेक प्रतिभाले समान अवसर पाउनुपर्छ। अशोक दर्जीले जसरी अहिले सफलताको शिखर चुमिरहेका छन् अब समाजमा लुकेर ओझेलमा परिरहेका ध्रुब बिक जस्ता प्रतिभालाई शहरसम्म ल्याई सफलताको पथमा अगाडी बढाउनु तपाई हाम्रो जिम्मेवारी हो। ध्रुब बिकले प्रेम परियारको ‘मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन, तर नमरेको प्रहर हुँदैन’ बोलको गीत गाएका थिए । उनको गायन शैली र शालीन स्वभावलाई दर्शकले औधी रुचाएका छन। बाजुरा जिल्लामा जन्मिएका स्वरका धनी धुर्ब्र बि.क पारिवारिक स्थिति समेत अत्यन्त नाजुक छ । पढाई खर्च जुटाउनकै लागि उनी कार्यक्रममा आफ्नो सुमधुर आवाज दर्शकसमक्ष पुर्याउने गर्छन। अशोक दर्जीजस्तै आफ्नो अमुल्य प्रतिभा सबैमाझ प्रस्तुत गर्दै सफलताको शिखर चुम्ने पालो अब ध्रुब बिकको।